CIN Khabar परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने (अडियोसहित)
परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने (अडियोसहित) सत्तागठबन्धन टुटाउन चलखेल भइरहेका छन्ः नेता गिरिराजमणि पोखरेल
राजन रुचाल शुक्रबार, भदौ २५, २०७८, १०:३१:००
एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको चर्चा सुनिन्छ । त्यसको संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत गरिसक्नुभएको छ । काँग्रेस एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने रणनीतिमा देखिँदा माओवादी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने बताइरहेको छ । अहिलेकै अबस्थामा एमसिसी पारित होला ? कि पूणर् नहुँदै सरकार ढल्ला ? साथी राजन रुचालले माओवादी नेत गिरीराजमणि पोखरेललाई सोध्नुभएको छ ।
सरकार गठन भएको २ महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले किन पूणर्ता पाउन नसकेको ?
हामीले सरकार विस्तार गर्न नचाहेको होइन । ती दुईवटा पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) को कानुनी समस्या हल नगरिकन सरकार विस्तार हुने कुरा नै थिएन ।
दोस्रो कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रमचाहिँ बनायौँ र त्यसको आधारमा अघि बढ्ने संयन्त्र पनि बनायौँ ।
यो बीचमा लगातार हाम्रो बीचमा छलफल चलिरहेको छ । अब हामी संसदमा एउटा बहुमतको स्थितिमा छाँै । सरकारले पूणर्ता पनि प्राप्त गर्छ । हामी संसदलाई पनि एजेण्डा दिएर अघि बढ्छौँ ।
तपाईँको पार्टिको अध्यक्ष प्रचण्डसमेत एमसीसी परियोजनाले सत्ता गठबन्धन फुटाउला कि भन्ने डर लागेको बताउँदै आउनुभएको छ । त्यस्तो अवस्था आएको हो र ?
होइन । अब कस्तो छ भन्दाखेरी हामीले पछिल्लो बेलामा केपी जीको नेतृत्वको सरकारमा हामी रहँदाखेरी पनि पार्टी फुटाउनका लागि देशभित्र र बाहिरका शक्ति लागेकै हुन् ।
हामीले यसमा लुकाउनुपर्ने छैन । हिजो जतिखेर हस्ताक्षर गरिएको थियो, त्यो बेलाको जस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । आजको परिवेशमा जनताबाट उठेका, विज्ञबाट उठेका कुरालाई ध्यान दिएर एमसीसी परिमार्जन गर्ने दिशामा नै लैजानु पर्दछ ।
हामी यसको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि त्यो राखिएन भनेदेखि हाम्रो लागि सरकार मूल कुरा हुँदैन ।
तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा एमसीसीले जवाफ दिइसकेको छ कि एमसीसीमा जे सम्झौता भयो भयो अब त्यो संशोधन हुँदैन । यदि त्यो संशोधन नभइकनै, परिमार्जन नभइकनै पारित हुने स्थिति आयो भने तपाईँहरू सरकारबाट हट्ने हो ?
हामी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध छौँ । हामी एमसीसीप्रति प्रतिबद्ध छैनौँ । हामी जुनसुकै देशको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा छाँै, हामीले सहयोग लिन नचाहेको होइन ।
तर त्यसका शर्त जस्ता खालका छन् त्यो शर्तहरु करेक्सन (परिमार्जन) नगरिकन त यथावत स्थितिमा पास गर्ने अवस्थामा छैनौँ ।
जवाफमा नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी छैन भनेको छ एक, दोस्रो यो परिमार्जन हुँदैन भनेको छ, तेस्रो यो सैन्य रणनीतिभित्र पर्दैन भनेको छ, तपाईँहरूले चाहेको पनि यही होइन र ?
अब हामी पाँचै दल बस्छौँ, छलफल गर्छौँ नि ।
प्रचण्डले कतै न कतै सूचना पाएर सङ्केत पाएरै भन्नु भएको होला नि ? गठबन्धन फुटाउने प्रयास भइरहेको छ भनेर ?
होइन यही देशभित्रकै खेलाडी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूमार्फत अरु पनि आउने हो त्यसकारणले निश्चित हो कि यो कुरा ल्याएर यो सरकारलाई कमजोर बनाउँ, हाम्रो देशलाई क्रिडास्थल बनाउँ भन्ने शक्ति त लाग्छन् नै ।
त्यो चुनौतीलाई व्यहोरिएरै यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने यत्तिखेरको आवश्यकता हो ।
एमाले र काँग्रेस मिलेर सत्ता पनि चलाउने एमसीसी पनि पारित गर्नेसम्मको सहमती बनेको छ भनिन्छ । कति सत्य ?
माओवादिलाई साथमा नलिईकन नेपालको राजनितिक समस्या अहिले हल हुँदैन । त्यसकारणले जो त्यो दिशामा जान्छन् त्यो आत्मघाती कुरा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८, १०:३१:००
केही समय सरेको नेकपा विवाद, टरेर जाला ?
पहिलो चरणमा खोप किन्न १० देखि १२ अर्ब आवश्यक
चाडबाड, चिसो र कोरोना : खानपानमा कसरी ख्याल गर्ने ?
'स्वास्थ्य सावधानीमा भएको लापरवाहीले भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ'
उपभोक्ता बनेर मन्त्री बजार पुगेपछि.....
के हलियाहरू साँच्चै मुक्त भए ?